(NEWZIMBABWE) US vows to maintain sanctions | Maravi
(NEWZIMBABWE) US vows to maintain sanctions
COMMENT - Translation: they won't give up until Zimbabwe hands over it's diamonds to Anglo-American De Beers, and it's platinum mines to Implats. Also read this editorial in The Post from 2010, Strangulation Of Zimbabwe.
THE United States vowed Wednesday that it would not lift sanctions imposed on Zimbabwe before there are signs of permanent political reforms. Assistant Secretary for African Affairs, Johnnie Carson told a telephone conference that Washington will maintain its targeted sanctions until it sees "sufficient progress in the area of democratisation."
"The US continues to maintain sanctions on Zimbabwe and will do so until we believe that substantial and irreversible progress has been made in the implementation of [reforms agreed under the Global Political Agreement]," Carson said.
[And the government as a whole, through the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001, which caused the collapse of the Zimbabwe Dollar, from Jan. 1st 2002 onwards. To cite ZDERA, Section 4 C, (1) and (2):
Up until this day, US government officials will not publicly admit that this document exists, or that the sanctions in it are against the Zimbabwean government as a whole, not 'targeted individuals'. They will also not admit that ZDERA caused the collapse of the Zimbabwe Dollar when it was introduced, which is why the Zimbabwe Dollar fell more against the US Dollar in the year 2002, than in the previous 6 years combined. (Correction - ZDERA was signed into law on Jan. 1st 2002, not December 31st 2001.) - MrK]
Mugabe maintains there is no justification for the sanctions with his Zanu PF party claiming they were meant to punish the country for its controversial land reforms.
Labels: JOHNNIE CARSON, SANCTIONS, ZDERA
(LUSAKATIMES) JCTR demands explanation for PF Gove...